PAGE PAGE ERCOLANI MONTEPULCIANO - Maqaayad Ercolani Montepulciano
HAWLGALKA IYO WARARKA
Xamaasad bilaabatay 1940 ...
Taariikhda qoyska Ercolani waa sheekada reer guuraaga iyo miinada dukaamada iyo hamiga. Waa sheekada kuwa jecel dhulkooda iyo dhulkoodaba ogaada siraha, u mahadnaqa udgoonka, dhadhaminta dhadhanka.
WAXQABADKA IYO ADEEGYADA
Dukaanka tooska ah ee alaabada shirkaduhu waxay ku yaalaan di Gracciano oo ku taal Corso 82 ee Montepulciano. Halkaan waxaad ka heli kartaa khamri, vin santo iyo khamri la xoojiyay, saliid, qamri, salami iyo nooca berry.
Waxaan sidoo kale qabannaa diyaarinta dambiisha iyo sanduuqyada hadiyadda.
DAAWOOYINKA IYO TILMAAMAHA
Kusoo wareeji carabkaaga .. tani waa loolanka hamiga leh ee qoyska Ercolani in Magaalada sifooyinka leh ee dhulka hoostiisa ah dhab ahaantii waxay kugula yaabi doontaa hunguriga!
Dhadhamada yar yar ee bilaashka ah marwalba waa ku soo dhaweynayaan booqashada bandhigyada cuntadeena iyo khamrigeenna iyadoo dhadhanka macaan badan leh, waxaan qabanqaabin karnaa dhadhan gaar ah iyadoo loo sii xajinaayo; sidoo kale kooxaha.
FARSAMADA IYO KHATARTA
Qoyska Ercolani Waxay sidoo kale bixisaa fursad ay ku aaddo booqashooyinka oo ay ku tijaabiso khibradaha cuntada iyo khamriga: dhadhanka Vino Nobile di Montepulciano, grappa iyo DOC vinsanti oo leh qaab lagu diyaarin karo hilibka, jiiska, saliidda iyo koobabka; safar hagitaan ah oo ku yaal Magaalada Hoose; Dalxiisyada dalxiisyada ee xatooyada baabuurta; nashaadaadka kaqeybgalka waqtiga goosashada; hawlo la socda oo ka socda baadiyaha oo booqasho ku jooga dhulka shirkadda.
Waxa ugu xiisaha badan waa waxa ay indhaheenu arki karaan ..
cinwaanka: Iyada oo loo marayo Gracciano del Corso 82
Telefoon iyo Fakis: + 39 0578716764
E-mail: info@ercolanimontepulciano.it | beeraha.ercolani@ pec.it
Saacadaha shaqada: Had iyo jeer furan
marka laga reebo maalinta ciida
Ka-qaybgalka waxaad aqbashaa siyaasadda asturnaanta
Naga soo raac
PI 00755780525 | PEC: beeraha.ercolani@ pec.it - ​​© Xuquuqda daabacaadda 2019-2022 Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin. - Powereb by Puntoweb Arezzo